मे 20, 2019 मे 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments अल्ट्रासाउण्ड, डा. राम बहादुर बोहरा
अल्ट्रासाउण्ड भिडियो एक्सरेले रोग पत्ता लगाउन ठूलो सहयोग गर्छ । यसलाई रोग पत्ता लगाउने महत्वपूर्ण प्रविधिको रूपमा हेरिन्छ । यसको सबैभन्दा बढी प्रयोग पेटको लागि गरिन्छ । पेटमा भएको समस्या पत्ता लगाउने यो नै सबैभन्दा भरपर्दो प्रविधि हो ।
पेटमा भएको पत्थरी पत्ता लगाउन यसको सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ । कलेजोमा समस्या छ, किड्नीमा कुनै समस्या छ भने पनि अल्ट्रासाउण्ड नै गरिन्छ । पेटको कुनै अंगहरूमा समस्या छ भने त्यो पत्ता लगाउन अल्ट्रासाउण्ड गरिन्छ ।
पेटमा रहेका अंगहरू किड्नी, कलेजो, गलव्ल्याडर, प्यानक्रियाज, प्रोस्टेस्ट लगायतका अंगहरू पेटको अल्ट्रासाउण्ड मार्फत गर्न सकिन्छ । थाईराइडको परीक्षण, छातीको परीक्षणमा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । रक्त-नशाको समस्या आएमा पनि अल्ट्रासाउण्ड मार्फत पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसमा ‘रेडिएशन’ हुँदैन । जसले मानिसलाई हानी गर्दैन । अहिलेसम्म यसको डरलाग्दो साइडइफेक्ट पनि केही देखिएको छैन । यो बच्चादेखि बालबालिकासम्मलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसको मुख्य विशेषता भनेको यसले बिरामीलाई कुनै हानी गर्दैन । यो सस्तो र सुलभ हुन्छ । पेटको समस्या भएको बेलामा त यो अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । यसको अरूभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसले अरूले भन्दा सजिलैसँग रोग पत्ता लगाउँछ । पानीको फोका होकी रगत जमेको छ भने अरू माध्यमबाट पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ भने अल्ट्रासाउण्डबाट सजिलै पत्ता लाग्छ ।
अल्ट्रासाउण्ड थरी-थरीका हुन्छन् । बढी मात्रामा पेटको नै अल्ट्रासाउण्ड गर्ने गरिन्छ । यसको लागि कम्तीमा ६ घण्टा खाली पेट राख्नुपर्छ । पिसाब पनि रोक्नुपर्ने हुन्छ । यो पुरूषका लागि भन्दा पनि महिलाका लागि बढी जरुरी छ । पिसाब रोक्यो भने पाठेघरको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकिन्छ ।
← एक्सरे किन गरिन्छ ?
चिसो पानीले नुहाउँदा हुने फाइदाहरु →
सेप्टेम्बर 10, 2018 नोभेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0